Mitady Fanakànana Ivelan’ny Fitsarana Ho An’ireo Vohikala izay Manitsakitsaka Ny Fizakàmanana Ny Volavolan-dalàna Vaovao Okrainiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2016 6:19 GMT
Tsy tahaka ny fampitandremana sy ny rafitra fanesorana misy ankehitriny izay mampitandrina amin'ny fandikàna, alohan'ny hidirana fitsarana, fa ilay volavolan-dàlana vaovao dia manolo-kevitra mba hanakanana amin'ny fomba ivelan'ny fitsarana ireo vohikala izay manitsakitsaka ny fizakàmanana. Sary navoakan'i Tetyana Lokot.
Manomana volavolan-dalàna ny parlemanta Okrainiana hitakiana amin'ny mpanome tolotra fampiantranoana sy ny mpanome tolotra aterineto mba hanakana ny vohikala rehetra mandika ny fiarovana ny fizakàmanana, ka tsy misy mihitsy endrika fitsarana amin'izany.
Nahazo fankatoavana tamin'ny famakiana azy voalohany ny 28 Janoary, ilay volavolan-dàlana no farany ihany amin'ny andianà fikasàna nataon'ny vondrona mpanao lalàna mba hampidirana fitsipika “manohitra ny fijirihana” ho ao anaty lalàna mba hiarovana ny indostria Okrainiana momba ny sinema, televiziona ary ny lahatsary. Fa mety hisy voka-dratsy amin'ny vovonana maro ao anaty tranonkala sy ireo mpampiasa aterineto ilay andiana fanovàna farany natolotra raha oharina amin'ny politika teo aloha.
Ny fiovàna iray manan-danja hita taratra teo amin'ilay volavolan-dalàna dia ny fisian'ny “vovonana maro-mpampiasa” ao anatin'ireo karazana vohikala voasivana noho ny fanitsakitsahana ny fizakàmanana. Mety ho tafiditra ao amin'ilay teny manjavozavo hoe “vovonana maro-mpampiasa” ny tambajotra sosialy, ny fifanakalozan-drakitra, ny tolotra cloud ary na ny milina fikarohana aza. Azo eritreretina, mety midika izany fa mety ho voasakana any Okraina ny vohikala toy ny Facebook, na ampahany amin'ny fitambaran'ny tolotra Google noho ny “antony fanoherana ny fijirihana”. Ohatra, mety ho voasakana ny vohikala toy ny YouTube na dia mpampiasa iray ihany aza no mamoaka (tsy nahazoana alàlana) sarimihetsika iray voaaron'ny fizakàmanana.
Manomana rafitra ho an'ny fisorohana sy fanafoanana ny fanitsakitsahana ny fizakàmanana ao anaty “Aterineto sy ny tambajotra ao an-toerana” ihany koa ilay volavolan-dalàna. Ny fanovàna farany dia mamela ny tena tompon'ilay votoaty voajirika handefa fampilazàna fanesorana ho any amn'ny tompon'ny vohikala izay mandika ary mitaky ny hamafàna ny votoaty voakasik'izany. Rehefa angatahana hanala ny votoaty toy izany, manana 24 ora ny tompon'ny vohikala hanatanterahany izany. Avy eo ny tompon'ilay vohikala, tokony hampahafantaina ny tompon'ny fizakàmanana ny fanakànana, fara fahatarany, 48 ora aorian'ny nandraisany voalohany ilay fangatahana. Ny hany tranga ahafahan'ny tompon'ny vohikala mandà ny fanalàna ny votoaty dia raha toa ka olon-kafa marina no tompon'ilay fizakàmanana, na raha misy fahadisoana na tsy fahamarinana ilay fampilazàna fanesorana.
Zava-baovao iray hafa mety hahafahan'ny tompon'ny fizakàmanana mitaky amin'ny mpanome tolotra fampiantranoana ny hamoahana ny torohay manokana mombamomba ny tompon'ny tranonkala. Raha tsy omena ao anatin'ny 24 ora izany torohay izany, dia tokony hanakana ilay vohikala (na ilay pejy) nampangaina ho nanitsakitsaka ny fizakàmanana ilay mpanome tolotra fampiantranoana, farafahatarany 24 ora taorian'ny nandraisany ny fitarainana. Mahatonga ny mpanome tolotra fampiantranoana ho tafiditra amin'ny teodraharaha iray faritan'ny “catch-22” ny fenitra tahàka izany, manery indrindra azy ireo hanajanona ny angon-drakitry ny mpanjifany.
Tao anatin'ny fiovàna mahaliana, ilay volavolan-dalàna dia mitaky ny tsy maintsy amoahan'ny tompon'ny vohikala “torohay azo antoka momba azy ireo” ao anaty WHOIS (ilay lahatahiry misy ny anaran-tsehatry ny Aterineto eran-tany) “amin'ny fomba ampy hamoronana fitoriana any amin'ny fitsarana.” Tsy mazava tsara ny zavatra tokony ho hita ao anatin'izany torohay izany sy ny drafitra hoentin'ny mpamorona ilay lalàna mba hampiharana io fitsipika io amin'ireo fikambanana izay manangona sy mamoaka ny torohay WHOIS ety anaty tranonkala.
Efa nampanahy ny mpiaro ny indostria Okrainiana ilay volavolan-dalàna vaovao, izay lazain'izy ireo fa misy fifanoherana amin'ny fomba fanao tsara kokoa any andrefana. Nilaza ny mpitondra tenin'ny Fikambanan'ny Aterineto any Okraina (InAU) fikambanana tsy mitady tombontsoa, manara-maso laàna momba ny indostria mifandraika amin'ny fifandraisandavitra, nilaza tamin'ny vohikalam-baovao AIN.UA fa mandrahona ny fahalalahana miteny ireo fenitra vaovao natolotra ary mety ho araraotina mba hanakanana ny vohikala rehetra izay manelingelina ety anaty tranonkala.
Nanambara tamin'ny mpanao gazety ny mpitondra tenin'ny InAU Tetyana Popova:
Mbola mamerina indray, mitady hanolo ny fombafomba mialohan'ny fitsarana izy ireo (ilay rafitra fampahafantarana sy fanesorana ampiasaina any Etazonia sy Eoropa) amin'ny fombafomba ivelan'ny fitsarana mba hamahàna ireo olana mikasika ny fizakàmanana sy ny zo mifampiankina amin'ny Aterineto. Tsy azo ekena izany.
Nanamarika i Popova fa vao mainka haharatsy kokoa ny fandehan-javatra ho an'ny olona rehetra eo amin'ny tsena ilay fanovana lalàna natolotra, anisan'izany ireo manàna fizakàmanana.
Na dia sarotra aza ny hamaritana ny hoe iza amin'ireo mpanao lalàna maro izay namolavola ilay volavolan-dalàna vaovao no tao ambadik'ireny fanovàna ireny, taterin'ny AIN.UA fa ny loharanom-baovaony dia mihevitra fa ny orinasa izay nandray anjara tamin'ny hetsika “Clear Skies”— tetikasa iray natomboky ny orinasa Okrainiana lehibe indrindra momba ny media, tamin'ny Jona 2013, mba hiadiana amin'ny fampiasàna tsy ara-dalàna ny lahatsary novokarin'ireo trano famokarana median'izy ireo ao amin'ny habaky ny aterineto Okrainiana—no nitondra ireo fanovàna izay mampiady hevitra.
Ny tetikasa iray ao anatin'ny hetsika “Clear Skies” dia ahafahan'ireo vohikala mampiantrano ny votoatin'ny lahatsarin'izy ireo maimaimpoana raha ohatra ka omena ny mpamokatra ilay lahatsary (asehon'ny mpilalao sady tompony) ny vola miditra rehetra avy amin'ny dokambarotra, tsy misy tavela ho an'ny vovonana aterineto. Raha toa ka tsy nahazoana alalana hampiantrano ny lahatsariny ilay vohikala, neken'ilay orinasa mpamokatra media ny hanohy ny fangatahana fanesorana sy, amin'ny toe-javatra tafahoatra, ny fitoriana arka ny lalàna. Hevitra iray hafa nokotrehan'ireo mpitrandraka media ny hamorona karazana “lisitra fotsy” misy ireo loharanonà tranonkala mba hanavahana ireo vohikalan'ny media manaja ny lalàna. Hatreto, na izany aza, tsy nahasarika afa-tsy ny sain'ireo “mpandika lalàna ratsy indrindra” ilay hetsika, miaraka amin'ny votoaty voajirika indrindra, tamin'ny famoahany ny lisitr'ireo tranonkala Okrainiana 10 voalohany malaza, mampiantrano matetika votoaty lahatsary, tamin'ny Desambra 2015.